3D na-aga aga n'ihi na gị logos, ederede na na dị nnọọ ewu ewu na intros na akụkụ ndị ọzọ nke post-mmepụta, ogologo Gara bụ ụbọchị mgbe ị ga-adị mkpa pụrụ iche nkwụnye ins iji nweta gị mmetụta, ị nwere ike nweta magburu onwe 3D na-aga aga mmepụta, dịtụ nanị na-adị mfe si nke igbe mgbe mmetụta, ebe a anyị ga-ike ụfọdụ 3D ederede na izubandu ya.
Mbụ anyị ọrụ bụ kee mejupụtara. N'ihi na 3D ederede ma ọ bụ shapes, ma ọ bụ ma ọ bụrụ na ị na-importing layered vector ndịna-emeputa dị ka a logo, e nwere ntọala mkpa ka ị nwee na gị mejupụtara maka ya niile na-arụ ọrụ.
Ma mgbe ị họrọ New mejupụtara ma ọ bụ na ihe dị otu site na-ahọpụta mejupụtara ntọala, gị mkpa gaa elu taabụ ma mgba ọkụ si ndabere Omuma ka Ray-esi ná nne agụ 3D-aza.
Ozugbo Switched Ray-esi ná nne agụ 3D, ị nwere ike ahụ setịpụrụ nhọrọ maka ya. M na hapụrụ mma na ndabara 3 n'ihi na nke a ngosipụta, dị ka ị pụrụ ịhụ, usoro ihe omume na-akọwa mmetụta nke dị iche iche àgwà na ọkwa-gị na a na ihuenyo, ma cheta na-aza oge nwere ike dịkwuo budata na elu àgwà, otú ọ bụ a guzozie omume maka ihe ahụ bu n'obi na ojiji bụ. Ikpeazụ ọnọdụ ebe a ga-a nhọrọ onwe onye dabeere na ihe usoro ga-eji maka na otú oge ị nwere ike na-eche maka nsụgharị ahụ.
Na na mere anyị nwere ike ịmepụta na-arụ ọrụ na 3D ederede na shapes si n'ime Mgbe mmetụta onwe ya, otú ka na-ebu na.
2. Ịmepụta anyị 3D ederede
Nzọụkwụ na-esonụ bụ ike anyị 3D ederede. M kere 2 iche iche ederede n'ígwé maka ihe abụọ okwu, Ijuanya na Share, nanị n'ihi na ọ na-eme ndụ ha iche iche a mfe usoro.
Ozugbo kere m gbanwee size nke ederede ka otú m na-amasị ya ma jide n'aka ma n'ígwé nọ 3D mode na usoro iheomume - na cube akara ngosi.
Ugbu a, na-agwụ agwụ, anyị nwere ike extrude ederede maka 3D. N'ime Ra-esi ná nne agụ mejupụtara 3D akpọkwa nwere mmezi àgwà, na-ahọpụta anyị ederede oyi akwa anyị nwere ike ịchọta jiometrị Nhọrọ ike na extruded 3D mmetụta.
Lee, emewo m gbakwụnyere ihe extrusion mmetụta mbụ oyi akwa, a omimi nke 20 ọrụ maka nke a oru ngo, ma dị nnọọ chọta a uru na ị na-ahụ anya mma. Ebe ị nwekwara ike ịgbakwunye bevels na na, ma ka onye a anyị na-dị nnọọ iji extrusion.
Ugboro otu na 2nd ederede oyi akwa na-enye anyị kwa okwu na-extrusion omimi nke 20.
Ugbu a, nke ahụ nwere ike adịghị anya-akpali nnọọ akpali nnọọ ugbu a, ma-arapara n'ahụ ya.
3. Ịmepụta 3D anya
Ọ dịghị anya karịsịa ikpọ na nkeji, Otú ọ dị, ugbu a, anyị na-aga ime ka ịma mma nke ndị a usoro. Anyị ọrụ mbụ bụ gbakwunye a igwefoto ka mejupụtara.
Na mgbe ahụ site na nri ịpị igwefoto oyi akwa otu ugboro kere, ịmepụta otu orbit Null maka igwefoto
Mgbe a na isi m kpebiri na m awụfu m ederede a obere ime ka ọtụtụ nke 3D mmetụta, nanị site na iji x, y na z axis na usoro iheomume panel, otú ahụ ugbu a anyị nwere nke a.
Ugbu a, na ka na-adịghị anya otú mma, ma, n'ihi na irè 3D ọ bụ uru na-echeta ọkụ bụ ihe niile. Anyị ka nwere ìhè ọkụkụ ihe niile dokwara ebe a, ya mere, ga-esi mara 3D ederede na anyị chọrọ itinye a mgbe ìhè ka mejupụtara.
M na-eji ọkọlọtọ ntọala na-enweghị ihe ọ bụla na-agbanwe agbanwe
nke a bụ n'ihi.
Dị ka ị pụrụ ịhụ, anyị nwere ugbu a magburu onwe 3D ederede, ugbu a ọ bụ oge izubandu ya.
4. Basics nke 3D Animation
Ugbu a anyị nwere ụfọdụ oké achọ 3D ederede, anyị chọrọ ijide n'aka na anyị na-eme ihe ndị kasị nke na mgbe ndụ ya. I nwere ike, N'ezie, ugbu a nanị iji na-emebu gbanwee na ọnọdụ ngwaọrụ ịkwaga ederede n'ígwé, agbanwe agba na na, na ọ bụrụ na i nwere ike a na-akpụ akpụ na igwefoto na ọbụna ìhè isi ị pụrụ n'ezie ike ụfọdụ mgbagwoju animations. Ma iji tinye ihe a, anyị nzọụkwụ mbụ bụ iji oké ngwá ọrụ wuru n'ime Mgbe mmetụta, na nke ahụ bụ 'Kwado kwa agwa 3D'. Nke a na-ịchọta n'okpuru Animation> Text> Kwado kwa Agwa 3D> menu ụzọ ka anyị pụrụ ịhụ.
M na-eme nke a n'ihi na ma ederede n'ígwé, otú ahụ ugbu a, anyị nwere ike itinye ọhụrụ ụdị nke ije na mgbanwe bụghị nanị iji okwu ahụ, ma ndị mmadụ odide, niile n'ime a 3D gburugburu ebe obibi.
Ugbu a, anyị nwere ike họrọ na-aga aga na anyị chọrọ si usoro iheomume dị ndụ button, ma ọ bụ ma ọ bụrụ na ị chọrọ nnwale a bit ị Mkpọ nnọọ pịa tinye ihe niile gbanwee Njirimara na gị oyi akwa ga-agụnye niile animators n'ihi na ị na-agbalị.
Ihe mbụ m na-eme mgbe na-arụ ọrụ na 3D nke a bụ, karịsịa ma ọ bụrụ na m na-aga na-na na dị ka anyị bụ ebe a, bụ ịkwaga oge cursor na njedebe nke ihe ndị mejupụtara na ịtọ a keyframe niile àgwà n'oge ahụ. Ihe nke a na-eme e debere ọgwụgwụ mgbe na-kpọmkwem ebe ị bụ ugbu a, mere, n'agbanyeghị ihe na-kwukwara, nke a bụ ebe okwu ga-ejedebe. Nke a pụrụ ịbụ nnọọ uru n'ihi na mgbe e mesịrị mgbanwe ime ka na-aga aga akwụsị were were mgbe i nwere set ọgwụgwụ mgbe na-arụ ọrụ na ya.
M mgbe ahụ ugboro ugboro otu nzọụkwụ maka okwu ọzọ.
A kwukwara na a na agba àgwà, n'ihi na n'ihu ihu naanị, nke onye ọ bụla okwu site na Tinye> Ngwongwo> Front na animator àgwà na usoro iheomume panel. Nke a bụ n'ihi na m chere a mma agba mgbanwe pụrụ gbakwunye na mmetụta, m na setịpụrụ ọgwụgwụ agba maka ijuanya oyi akwa dị ka-acha ọcha, na òkè oyi akwa dị ka acha anụnụ anụnụ. M na-upped ìhè osisi ike a obere dị nnọọ ime ka mmetụta a obere ihe kọwaa. Ka ị na-enwe ọganihu site agbalị si a ngwaọrụ ịtụ egwu ịgbanwe ihe ruo na-kpọmkwem anya ị chọrọ. Ị nwere ike nri pịa ma Tọgharia ọ bụla oyi akwa azụ mmalite ma ọ bụrụ na ị na-adịghị amasị ihe ị ejedebe na. N'ihi nke a nile bụ njedebe n'ókè nke usoro ebe a.
Ugbu a, anyị mkpa ka ịgbakwunye na anyị ije.
5. ndụ na Text na 3D
Mbụ usoro m chọrọ ime na-na-abụọ okwu na ihuenyo. M na-chọrọ iji tụgharịa na agba n'ihi ya, ha nwere ike ịgbanwe mgbe e mesịrị. M họọrọ a dị mfe na-aga aga ebe a, na ihe ijuanya oyi akwa ịdaba ihuenyo na òkè oyi akwa ebili n'ime ya. Nke a mere si ọnọdụ na-aga aga ọnọdụ nanị site ndị mejupụtara y axis ụkpụrụ. Ya mere na oge cursor ná mmalite nke usoro iheomume na m na-ijuanya ọnọdụ dị nnọọ n'ofè ihuenyo, nke mesịrị bụrụ -1000, na ahụ setịpụrụ na òkè uru 10,000 n'ihi ya, ọ na-ebili n'ime ihuenyo. M na-gbanwere ma agba àgwà na-na-abụghị nke ọgwụgwụ ụkpụrụ. Ịnọ na-eche acha anụnụ anụnụ, Ekekọrịta-acha ọcha.
Isetịpụ mbụ keyframe na okwu ndị a na ọnọdụ, m mgbe ahụ kpaliri on 2 sekọnd, setịpụrụ a keyframe maka ijuanya oyi akwa azụ na ya mmalite ọnọdụ, otú ahụ ka na-aga aga ga-egosi na okwu idobe n'ime ihuenyo n'elu 2 sekọnd. M ahụ setịpụrụ a keyframe maka òkè oyi akwa na 3 sekọnd, nke mere na onye na-ebili na okokụre njem 1 abụọ mgbe mbụ okwu, na-akwụsị elu dị ka anyị bụ ndị a.
The esote nke na-aga aga bụ bugharia okwu tinyere z axis, otú ahụ ka m nanị setịpụrụ a keyframe na a adiana uru nke 1, na mgbe ọzọ mgbe m chọrọ ka na-aga aga na-akwụsị ma n'ígwé.
Nzọụkwụ na-esonụ m chọrọ ime bụ iji a adiana ka ọ bụla agwa n'aka nke ya, kama dum okwu n'out oge, a na-enweta na dechapụ ọnọdụ ke nso selector.
Kpọmkwem uru ebe a bụ dabere na otú nnukwu okwu gị bụ na na, nnwale ruo mgbe ị ga-esi na mmetụta ị chọrọ, kama ihe ọ na-eme bụ itinye a na-egbu oge ka mmetụta maka onye ọ bụla agwa otú i nwere ike adagharị otú ha akpali.
Mgbe ahụ, m etinyere m na-esote adiana, x axis maka òkè na y axis maka ijuanya, na dechapụ na ebe, na ugboro ugboro na keyframes iji hazie m na-aga aga.
Ka anyị pụrụ ịhụ, na-eke na animated 3D ederede bụ ụkpụrụ dị mfe dị ka ihe ọ bụla ọzọ na-aga aga, ndị wuru na ngwaọrụ na-eme ka eke na 3D ederede na ọkụ nnọọ n'ụzọ kwụ ọtọ. The complexity adịghị abịa mgbe ị na-eme atụmatụ na-aga aga usoro onwe ya, ọ bụrụ na ị nwere otutu-akpụ akpụ akpọkwa mmezi akụkụ nwere ike ime ka aghara dị ka ebe ihe niile bụ ma ọ bụrụ na ị kpacharaghị anya. Atụmatụ ya, na-arụ ọrụ methodically na onye ọ bụla timeframe ka ọ bụla components ebe ị chọrọ ka ọ bụrụ na ị gaghị aga n'ebe dị anya na-ezighị ezi.
> Resource> Video> Olee otú Mee 3D Animation na Mgbe mmetụta